roadsafety Archives - Ayanda Msweli - Road Safety Ambassador
Isithembu sihle kubanikazi baso kodwa siyingozi uma sizokwenziwa iphoyisa lomgwaqo (Traffic Officer). Amaphoyisa avamise ukuhamba ngamabili emotweni. Lokho kusho ukuthi imoto eyodwa isetshenzwa amaphoyisa amabili, kanjani na? *Uma iphoyisa elilodwa limisa imoto liyokhuluma nomshayeli, leli elinye lima buqamama ligade noma yini engenzeka kuleli elikhuluma nomshayeli. Ngesilungu lokho kubizwa nge back up . *Khumbula phela imoto …
Isithembu Read More »
Ingozi Yokuhlehla/Ka reverse
Ngifisa kesithi janti engozini ka reverse. Umbuzo uthi yini ingozi ka reverse? Ivame ukwenzeka kuphi, nini futhi? Izimpendulo Loluhlobo lwengozi luvame ukwenzeka ngezimpelasonto. Loluhlobo lwengozi luvame ukwenzeka egcekeni/eyadini ngemigqibelo noma ngamasonto. Luvame ukwenzeka kanje. Uya emcimbini umoya wakho ugcwele injabulo,ulungisela ukuphuma ekhaya ,imoto iyaduma, umculo emotweni uthe ukuba phezulu kunokwejwayelekile, ngesikhathi uyongena emotweni, ukhohlwe indaba …
Ingozi Yokuhlehla/Ka reverse Read More »
8 Comments	/ Road Safety Tips / By Ayanda Msweli
Okumele ukwazi ngengozi yemoto. *Zehlukene kabili izingozi zomgwaqo 1.Ingozi lapho kulimele khona abantu *Kuloluhlobo lwengozi awuyigudluzi imoto endaweni yengozi kodwa ulinda amaphoyisa nama Ambulance . 2.Ingozi lapho kungalimalanga muntu khona. *Kuloluhlobo lwengozi…awulindi amaphoyisa ngaphambi kokugudluza izimoto. Nakhu Okumele Ukwenze *Gudluza imoto emgwaqeni *Qopha imizizima(dweba i sketch) *Indawo negama lomgwaqo lapho kwenzeke khona ingozi, eduze kwani …
Ingozi yomgwaqo. Read More »
Ingozi Edalwa Ukuphuthaza Ifoni.
Uyabazi ubunzima bokuphuthaza ifon, ikhala phansi kwesihlalo semoto, kulowomzuzu imoto uyibambe phansi? *Ake ungixoxele noma uxoxele umngani wakho ngengozi eyacishe yadaleka noma eyadaleka ngesikhathi uphuthaza ifoni. *Ngesikhathi uyiphuthaza, akukaze kufike emqondweni wakho ukuthi akonakele usazomfonela lowomuntu? *Akukaze kukufikele emqondweni ukuthi mhlawumbe ayibalulekile kangako njalo naleyofoni? *Awukaze ucabange nje nokuthi njengoba ikhala emajukujukwini nje ukuyifuna, uzobe …
Ingozi Edalwa Ukuphuthaza Ifoni. Read More »
Ukuqudulelana kuwumphumela wokungahoshelani ngokwemimoya. Lapha sizogxila ekuquduleni kwabasebudlelwaneni behamba ngemoto eyodwa. Uma nihamba ngemoto ningezweni kuba umqansa ongakhwelwa mbongolo kulona oshayelayo ngoba kumele amehlo akhe adlule esitheni sakhe ekuyobhekeni lesisibuko esingaphesheya kwesokunxele, kanye naso lesi esiphakathi nendawo siyakwenza ukuthi uzithole usubona isitha sakho ngendlela engahlelekile. Umsebenzi wezibuko emotweni ubaluleke ngendlela efanayo. Ngenxa yamandla engxabano kuyenzeka …
Ingozi Yokuqudulelana Read More »